Ukwahlula iintsomi kwiinyani kwiVampire: The Requiem
Iphambuka phi intsomi kaVampire kwinkolelo edumileyo? Ziphi iinyani ezinyanisekileyo? Ezi nkcazo zilandelayo zichaza iinyani zehlabathi zokwenyani, ukucacisa inyani okanye ubuxoki kwiLizwe lobumnyama.
ukhawuleza kangakanani ukusebenza kwebenadryl yokulala
I-Vampire kufuneka izixhase kwigazi labaphilayo: Inyani. Kwabahlobo, isenzo sokondla sinomdla kakhulu. Inqanawa iziva bonwabile xa isenzeka, kwaye i-vampire yokondla ihamba ngokukhawuleza. Ezinye i-vampires zigcina ukungafi kwazo ngokusela igazi lezilwanyana, kodwa kunqabile ixesha elide, njengoko ukuthanda kwabo okanye iimfuno zemizimba yabo eqalekisiweyo ibanyanzela ukuba bafune igazi lomntu.
IiVampire azifi: Iintsomi nenyaniso. Nangona ii-vampires zingabonakali zindala, kwaye ezinye zisinda kwiinkulungwane, i-Kindred isebenzisa igama elithi undead kunokuba lingafi. I-Vampirism sisiqalekiso, hayi intsikelelo. Ihamba nayo ngamandla amakhulu, kodwa imeko yokuba yivampisi ikwazisa nezinto ezininzi ezimbi, hayi eyona incinci ibandakanya ingqumbo yangaphakathi yeSilo kunye nokondla igazi lomntu.
Ixhoba le-vampire ngokuzenzekelayo liba yivampire: Inkolelo. Akunyanzelekanga ukuba ube yivampire ukuba uyalunywa okanye ubulawe yivampasi. Kuthatha isenzo esaziwayo sokuthanda, esaziwa njenge-Embrace, ukwenza i-vampire entsha. Ewe, i-vampire ishiya kancinci ukumakisha ukudlula kwayo ukuba uyakhathala. Yonke i-vampire kufuneka iyenze ukufihla inxeba elishiyiweyo ngokondla kwayo kukuyikhotha xa igqibile.
IiVampire zineendlela zonke zamandla angaphezu kwendalo, njengokujika zibe zizilwanyana, ukubhabha, kunye nokusebenzisa amandla alishumi elinambini: Inyaniso. Ngelixa la magunya engafumanekiyo kwindalo iphela, i-vampires inezixhobo ezizodwa, ezaziwa njengeeNgqeqesho, ezinokuthi zinike umntu amandla angafaniyo afana nalawa nangaphezulu.
I-Vampires inokwabelana ngesondo: Inyani. Ngelixa isenzo sokondla sithatha indawo yayo yonke iminqweno yomzimba, i-vampires isenokuzibandakanya kwisini kwaye ikonwabele oko. Ngokumangalisayo, nangona kunjalo, imeko yeemvakalelo zesondo iyanyamalala emva koKwamkelwa. I-vampire inokuyonwabela imvakalelo yokwabelana ngesondo, kodwa hayi ngaphezulu kokuba inandiphe ivumba elithozamisayo okanye ukubanjwa kwelaphu elinobunewunewu.
Isibonda somthi sitshabalalisa i-vampires: Inkolelo. I-Vampires ayitshatyalaliswa xa ibekwe; zibanjwa kwi-stasis. Umzimba we-vampire ubuna ngokuthe chu xa uvaleleke kweli lizwe, usiba ngokufana kakhulu.
I-Vampires ayibonisi njengabantu abaqhelekileyo kwikhamera okanye kwizipili: Inyaniso. IiVampires zibonisa kunye neempawu zazo ezifihliweyo kwimithombo yeendaba yokufota (kubandakanya ividiyo) nakwizipili. Banokuphikisana okwethutyana nesiphumo, kodwa ngokungagqibeki, amanqaku abo afihliwe. Kuyafana nokurekhodwa kwelizwi; Amazwi e-vampires athathwe ngokuqhelekileyo kwiirekhodi zezwi.
Ukukhanya kwelanga kutshisa ii-vampires: Inyani. Njengengxenye yesiqalekiso sabo, i-vampires iyabuyela ekuthinteni kwelanga, imitha yayo ebalulekileyo etshisa inyama yabo engafanga. I-Vampires zihlala zichitha iiyure zasemini kubuthongo obubandayo bokungafi, kwaye kuphela esona sisombululo sinokususa ubunzima bokulala ngenkani kwemini nokuba lixesha elifutshane.
Igalikhi kunye nokubaleka kwamanzi kugxotha i-vampires: Intsomi. Ezo ngcamango zinjalo
ayikho enye into ngaphandle kweentsomi zabafazi, ukunyanzelwa kwenkcubeko, okanye mhlawumbi ukuvalwa kwamagazi athile e-Kindred.
IiVampire ziyacekiseka yiminqamlezo kunye nezinye iisimboli ezingcwele: Intsomi-phantse. Ngelixa kunjalo kungenjalo ngesiqhelo, umntu ozinikeleyo ngamanye amaxesha uyabachaphazela abahlobo ngemimangaliso yokholo lwabo.
Imiphefumlo yeVampires ifile njengemizimba yabo: Intsomi nenyaniso. I-vampire inokukholelwa ukuba uziva imvakalelo, kodwa eyona nto ayivayo sisandi seemvakalelo zokufa ezisebenza kwintsalela yomphefumlo wakhe kumava akhe angoku. Oko kukuthi, i-vampire evakalelwa ngumsindo inokuba nomsindo malunga nomsindo wayo, kodwa isandi semvakalelo ngokwenyani sivela kwimeko ethile i-vampire ejongene nayo ebomini. Le meko ibangela iimeko ezininzi ezingaqhelekanga. I-vampire engazange ifumane imvakalelo enikezelweyo ngaphambi kokuba ibe yi-Kindred inokudideka, ngelixa igcisa le-vampiric lingenza umsebenzi wobugcisa ongenalo nolwazelelelo lokwenene lweemvakalelo.
udidi lokukhulelwa c kuthetha
Ungayitshintsha njani irediyetha
ranitidine nini ukuthatha
ngaphezulu kwamayeza e-counter yomqala obuhlungu
I-vanahist pd yeentsana
ungayithatha i-valacyclovir ngelixa ukhulelwe